Fitiavana: ny dingana 10 handalovanao - Fifandraisana
Fitiavana: ny dingana 10 handalovanao
Ny fitiavana ny olona iray dia traikefa nahafinaritra tokoa…
Izy io koa dia mampivarahontsana, mampientam-po, mahasosotra, ary amin'ny ankapobeny dia rollercoaster ara-pihetseham-po izay mahatalanjona sy mampihoron-koditra.
Raha tsara vintana ianao fa nihaona tamina olona manokana ary mieritreritra fa raiki-pitia amin'izy ireo dia azo inoana fa hiaina ity manaraka ity ianao.
Raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny olona izay lavo tamin'ny hafa dia nandia ireo dingana ireo, mba hahafahanao mahazo antoka fa ny ankamaroan'ny olona amin'ny fiainanao dia afaka mifandray amin'ny zavatra iainanao.
ny fomba fikirakirana vady maditra
Hell, ny ankamaroan'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra dia nalaina avy tamin'ireto dingana ireto rehefa maneho ny fifandraisana misy, satria afaka mifandray amin'izy ireo ny olona.
Mieritreritra ianao fa mety ho raiki-pitia? Ity no antenaina:
Horonantsary 10 am-pitiavana miaraka amina olona iray
Dingana voalohany: fahatsapana fa liana amin'ity olona ity ianao mihoatra ny sakaizanao
Matetika io dia mitokona tsy misy antony ary mamela anao amin'ny valanoranonao mihantona any amin'ny faritra atsimo amin'ny Antarctica.
Minitra iray dia mizara sakafo atoandro amin'ny mpiara-miasa iray ianao, ary ny minitra manaraka dia mihamangatsiaka ny entanao rehefa entinao ny fomba ihorenan'ny orony sy ny fidiny rehefa mitsako izy ireo.
Avy eo mahavoa anao: hell masina, tianao ity olona ity.
Taorian'io fahatsiarovan-tena io dia tsy ela akory dia vita ny karazana daty iray, na zava-pisotro aorian'ny asa, na sarimihetsika, na fiaraha-misakafo… tsy misy ilay lehilahy mipetraka eo akaikinao any am-piasana ary mihinana an'i Cheetos tontolo andro tagging along.
Dingana faharoa: Preoccupation
Ny olona nianjera taminao dia ao an-tsainao foana.
Fenoina feno ny kapoakanao satria mieritreritra azy ireo ianao, misavoana ny masonao any an-dakilasy na mandritra ny fivoriana any am-piasana satria miezaka mamantatra ny dingana manaraka ianao.
Malahelo ny fe-potoana farany ianao satria mieritreritra ny endrik'izy ireo tamin'ny fotoana farany nahitanao azy ireo, fa tsy afaka mifantoka amin'ny asanao.
Matotra tokoa izy ireo, mameno ny eritreritrao mifoha rehetra, ary mety hiaro anao amin'ny torimaso mety amin'ny alina aza.
ny fomba hahatonga ny olon-tiana ho be fitiavana
Dingana fahatelo: fanolorana tena ho azy
Ny zavatra rehetra ataon'izy ireo dia mahafatifaty fotsiny, sa tsy izany? Enyaaah. Izany dia. TENA.
Fantatra amin'ny anarana hoe 'mandratra' ihany koa, ity sehatra ity dia mamadika anao ho toy ny jelly mampihetsi-po izay mampientanentana anao fotsiny amin'ny zavatra rehetra ataon'ny vadinao.
Mety ho tianao ny fitiavany ny sandwich goavambe sy misavoritaka izay mahazo azy ireo rehefa misakafo izy ireo, na mahita ny fomba itenenan'izy ireo amin'ny alina mba hahafinaritra azy tanteraka.
Manopy ny tongolo tongolo ianao ary fahalalana tsara kokoa ity olona ity, ary ny zavatra tsara rehetra ataon'izy ireo no zavatra manintona indrindra eran'izao tontolo izao.
Tsy afaka manao ratsy izy ireo, mahavariana izy ireo, ary te-hanjaitra ny tenanareo fotsiny ianareo mba tsy ho voatery hisaraka intsony mandrakizay mihitsy ianareo.
Angamba kely ny ampahany amin'ny zaitra, nefa mbola. ADORBS.
Dingana fahefatra: tsy fahampiana sy tsy fahatokisan-tena
Eto ianao no tena mirotsaka an-tsehatra amin'ilay olona, ​​saingy mbola tsy azonao antoka ny zavatra tsapan'izy ireo momba anao satria mitaintain-dava loatra ianao ka tsy afaka miresaka izany, noho izany ianao dia mikorontana sy misavoritaka ary manahy ny amin'izay lazainao (Miaina) ary mieritreritra fa mety mino izy ireo fa adala tanteraka ianao ary mba tsikaritr'izy ireo fa nanadino ny deodorantanao androany ianao dia aleo tsy nofihininao akaiky loatra izy ireo (BreathE) fa raha tsy nofihininao izy ireo dia mety hieritreritra izy ireo fa tsy Tena tiako be izy ireo toa anao fa tsy tianao ny hieritreretan'izy ireo fa maimbo ianao ary ary (MITSY AMIN'NY PANINA ...
^ Toy izany.
Amin'ity fotoana ity dia ho variana amin'ny zava-drehetra ianao na avy niandry ela loatra ianao handefasana hafatra an-tsoratra raha nandidy zavatra snooty loatra ianao tamin'ny fotoana farany nivoahanao nisakafo.
Mandeha amin'ny atody azo an-tsaina ianao, mieritreritra fa manana anao sy ny fihetsikao eo ambanin'ny mikraoskaopy ianao.
Tsy manao izany izy ireo.
Azo inoana fa tsy milamin-tsaina toa anao koa izy ireo, ary samy manao ny fihetsem-po mitovy amin'ny mihazakazaka toy ny emus mikoropaka ianao eo am-piezahana mafy hitazona azy ho tsara ivelany.
Dingana fahadimy: fitomboan'ny fifankatiavana
Mety efa natory imbetsaka ianao, saingy maharitra fotoana fohy vao tena mahazo aina amin'ny olona iray.
Arakaraka ny fotoana iarahanareo miaraka, ny akaiky kokoa ianao dia afaka ny ho tonga : rava ny rindrina miaro, avelao hifanakaiky kely ianareo, angamba hizara tantara momba ny lasa.
Mety hahita ny tenanao ao anaty toe-javatra iray aza ianao rehefa mifanampy mandritra ny fotoan-tsarotra, toy ny olan'ny fianakaviana, olana ara-pahasalamana, na fotoan-tsarotra amin'ny asa.
Na izany na tsy izany dia misy ambaratonga fanakaikezana vaovao hita, ary mahazo fahatsapana matanjaka iza- iza ianareo roa tonta, eo ambanin'ireo saron-tava izay ataontsika rehetra isan'andro.
Dingana fahenina: fifaliana
Mahagaga tokoa ny zava-drehetra eto an-tany. Mahafinaritra ny fiainana. Salama lanitra! Oviana ianao no lasa manga be?
Rehefa tratranao io teboka io, dia faly ianao amin'ny ankapobeny ka tsy mandeha amin'ny tany madiodio intsony: mitsinkafona be eo amboniny ianao.
Raha ny marina, ity hevitra ity dia voarakitra ao amin'ny sarimihetsika My Fair Lady. Rehefa nokapohin'i Miss Whatsername tanteraka i dudebro dia nihira izy:
Nandeha nidina an'io arabe io aho taloha, fa ny lampivato dia nijanona teo ambanin'ny tongotro talohan'izay… indray mandeha aho dia ambony ny tantara, fantatro fa teny amin'ny arabe onenananao aho.
Karazana mahafatifaty, huh? Cheesy be ihany koa amin'ny fomba mozika 1960, ary ny ankamaroantsika dia tsy nahita izany raha vao nifampiresaka tamin'ny tazo ratsy be tamin'ny 3 ora maraina nefa tsy misy zavatra hafa amin'ny fahitalavitra, fa tsy maninona!
ahoana no ahalalako raha tia ahy izy na te hiara-matory amiko fotsiny
Mampiseho tsara ny karazana firehetam-po gidraka iainantsika io rehefa mirohondrohona ao anatintsika ireo hormonina be fitiavana.
Dingana fahafito: Ny fialana sasatra
Resadresaka anatiny: 'Omg omg ity dia miha mafy tokoa ary tsy fantatro izay tokony hatao momba azy'.
Raha ny mahazatra, amin'izao fotoana izao, dia miharihary mazava fa ity… dia TENA. Ity dia maelstrom fihetsem-po mahery vaika tokoa ho an'ny olona, ​​ary izany dia HUGE.
Tena miavaka aminao ity olona ity, ary tianao izy ireo handray anjara lehibe amin'ny fiainanao, ary ho sosotra tokoa ianao raha very azy ireo.
Ireo fahatsapana ireo dia mety hahatonga ny olona ho tena matahotra sy marefo ary matetika mahatonga azy ireo hihemotra kely mba handaminana ny zavatra tsapany momba ilay zavatra manontolo.
Ity fialan-tsasatra ity dia mety hiteraka korontana amin'ny fifandraisana miroborobo, indrindra raha tsy tena misokatra sy manao ny marina momba ny zavatra iainany ireo antoko.
Indraindray dia hisy ny fifanatonana / hiala mandroso sy miverina mandihy vetivety, izay mampatahotra indrindra raha samy manao azy ny olona roa.
Dingana valo: fahasaro-piaro SY Fananana
Ny roa amin'ireo gremlins kely ratsy tarehy ireo dia mampiakatra ny lohany mandritra ny vanim-potoana akaiky sy fihemorana, ary afaka miseho amin'ny fomba maro samihafa.
Mety tsy mbola fantatrao ny karazana fifandraisana tadiavinao amin'ilay olona, ​​fa azonao antoka fa te hanana antoka ianao fa tsy misy olon-kafa mifanipaka ao am-pahatongavanao amin'ny tsy fahatapahan-kevitra!
Tahotra holavina na ny fahaverezana dia afaka manao anao ho toy ny imbecile tanteraka dieny izao.
ny fomba tsy mahatsiaro tena ho meloka rehefa avy manambaka
Azonao atao ny manadihady ny kaonty media sosialy ataon'ny namanao mba hanandramana mitady famantarana fa liana amin'ny olon-kafa izy ireo, na manamarina ny telefaonin'izy ireo rehefa ao amin'ny trano fidiovana, na zavatra maro hafa izay mahatonga anao ho asshole goavambe.
Azontsika izany, matahotra ianao, fa aza atao d * ck.
Aza mieritreritra: manontany.
Avy eo manontany bebe kokoa. Ary miresaka bebe kokoa.
Dingana sivy: Ataovy na tsia
Ity no dingana izay ahitanao ny tenanao maniry ny hanamafy ny hoe 'inona izany' amin'ny fifandraisana iray, na mihazakazaka mikiakiaka amin'ny farany satria tototry ny fihetsem-ponao manokana ianao.
Raha tianao ity olona ity ary te hamboly zavatra tena izy miaraka aminy dia mahereza ary raiso ny dingana.
Dingana fahafolo: firaisana
Raha nahavita namakivaky ny dingana sivy ianao nefa tsy nandositra tamin'ny fampihorohoroana izaitsizy, dia vintana ianao sy ny olon-tianao efa niresaka tsara ary nanapa-kevitra ny hiala amin'ny fifandraisana.
Ny fiaraha-miasa amin-kitsimpo amina olona iray izay tena tianao dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra sy mahafa-po azon'ny olona iray amin'ny androm-piainany, sy ny fitiavany - tena fitiavana - no hery matanjaka indrindra eto ambonin'ny planeta.
Mbola tsy azonao antoka raha fitiavana no tsapanao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana no hilazana raha misy ankizivavy tia anao: famantarana mazava 12 ho anao
Fitiavana ny fitiavana: famantarana 5 ny fahatsapanao ho azy ireo
ny fomba hijerena vehivavy kokoa amin'ny maha-bandy
tsy afaka mijery olona eo amin'ny masony
ny fomba hiverenana amin'ny lala-mahitsy
ahoana no ahalalanao raha manana olana amin'ny fitokisana ianao
Nahoana aho no mahatsapa amin'ny toerana